Shiinaha Cryptococcal Soosaarayaasha Tijaabada Antigen iyo alaableyda | Liming Bio
Tallaabada 'StrongStep'® Qalabka loo yaqaan 'Cryptococcal Antigen Rapid Test Device' waa baaritaan deg deg ah oo loogu talagay baaritaanka polysaccharide kapsula. antigens-ka isku-dhafan noocyada 'Cryptococcus complex' (Cryptococcus neoformans iyo Cryptococcus gattii) oo ku jirta serum, plasma, dhiig dhan iyo dareeraha laf-dhabarka maskaxda (CSF). Baaritaanku waa tijaabin dhakhtar-isticmaal tijaabo ah oo kaa caawin karaogaanshaha cudurka loo yaqaan 'cryptococcosis'.
Cryptococcosis waxaa sababa labada nooc ee isku-dhafka noocyada 'Cryptococcus complex' (Cryptococcus neoformans iyo Cryptococcus gattii). Shakhsiyaadka naafada ahDifaaca unugyada dhexdhexaadka ku jira ayaa ah halista ugu badan ee infekshan. Cryptococcosis waa midcudurada faafa ee ugu badan bukaanada AIDS-ka. Ogaanshahaloo yaqaan 'cryptococcal antigen' ee ku jirta serum iyo CSF ​​ayaa si ballaadhan loogu isticmaalay si aad ah xasaasiyad sare iyo gaar ahaaneed.
Tallaabada 'StrongStep'® Qalabka loo yaqaan 'Cryptococcal Antigen Rapid Test Device' ayaa loogu talagalay lagu ogaado isku-dhafka noocyada 'Cryptococcus' iyadoo loo marayo fasiraadda muuqaalka ee midabka horumarinta xargaha gudaha. Xuubka waxaa lagu dhaqdhaqaaqay antiAntibiyootiko loo yaqaan 'Cryptococcal monoclonal antibody' oo ku taal gobolka imtixaanka. Inta lagu jiro baaritaanka, tijaabadawaxaa loo oggol yahay inuu ku falceliyo qaybaha midabka leh ee anti-Cryptococcal antibody conjugates, kuwaas oo lagu precoated on suufka conjugate ee imtixaanka. Isku dar ah markaaku dhaqaaqo xuubka ficil xinjireed, oo la falgala reagent-yada ku yaal xuub Haddii ay jiri lahaayeen in ku filan oo loo yaqaan 'Cryptococcal antigens' ee tijaabooyinka, midab lehfaashad ayaa ka samaysan doonta aagga tijaabada ee xuubka. Jiritaanka kooxdan midabka lehwaxay muujineysaa natiijo wax ku ool ah, halka maqnaashaheeda ay muujineyso natiijo taban. Muuqaaloo ah koox midab leh oo ku taal aagga koontaroolka ayaa u adeegta sida xakamaynta nidaamka. Tani waxay muujineysaamugga saxa ah ee muunada ayaa lagu daray iyo xuubka xuubka ayaa leh dhacay.
Kit Qalabkan waxaa loogu talagalay INTII VITRO ogaanshaha cudurka.
Kit Qalabkan waxaa loogu talagalay xirfadle keliya.
Carefully Si taxaddar leh u akhri tilmaamaha intaadan imtixaanka sameyn.
Product Badeecadani kuma jirto wax laga helo ilaha aadanaha.
Use Ha isticmaalin waxyaabaha ku jira xirmada ka dib taariikhda uu dhacayo.
Le U qaado dhammaan tijaabooyinka sida cudurada faafa u keeni kara.
■ Raac nidaamka caadiga ah ee sheybaarka iyo tilmaamaha badbaadada nafsiyeed ee maaraynta iyo wasakhda waxyaalaha faafin kara. Marka nidaamka baaritaanka uu yahaydhammeystir, tuur tijaabooyinka ka dib markii aad ku keydiso 121 121 ugu yaraan 20 daqiiqo Haddii kale, waxaa lagu daaweyn karaa 0.5% Sodium Hypochloritesaacado ka hor intaan la tuurin.
Ha ku dhejin boodhadhka reagag afka ama sigaar ha cabbin ama ha cunin markaad wax qabanaysid tijaabooyin.
Ar Xiro gacno gashi inta lagu guda jiro howsha oo dhan.
Hore: Chlamydia Antigen
Xiga: HSV 12 Antigen Test
Tijaabinta Degdegga ah ee loogu talagalay Sars-Cov-2 Antigen
Sars-Cov-2 Antigen Degdega ah
Imtixaanka Sars-Cov-2 Antigen
H. Pylori Ag Imtixaanka Degdega Ah Wuxuu Ogaadaa Antigen, Qalabka Coronavirus Antigen Test, Novel Coronavirus Degdega ah Ket Test, Vibrio Cholerae O1 / O139 Antigen Combo Tijaabada Degdega ah, Qalabka Imtixaanka Igm / Iggrapid, Coronavirus ee Tijaabada Covid-19,